Ahoana ny fomba hivezivezy ny endrika vaovao Semalt ary ampiasao izany mba hampiorina avo ny Google
Mandany 50 milliseconds ho an'ny mpampiasa hanangana ny hevitry ny tranonkalanao. Ireo mpampiasa dia mitady interface tsotra ampiasaina amin'ny tranonkalany. Raha torohevitra tsara izany amin'ny lafiny iray amin'ny tranonkalanao, Semalt dia nampihatra izany tamin'ny tranonkalany vaovao.
Ny pejy web an'ny Semalt dia mikatsaka ny hanambatra endrika kanto marefo sy maoderina miaraka amin'ny interface tsara mora vakiana. Miaraka amin'io famolavolana io, Semalt dia nanamora ny fahatakaran'izy ireo ny fomba hahatongavany anao ho any amin'ny tampon'ny Google.
Famerenana haingana ny terminology SEO
Alohan'ny hahatongavantsika ho an'ny hena ao amin'ilay lohahevitra, dia ilaina ny manana fahatakarana ankapobeny ny sasany amin'ny jargon ilaina. Ny bilaoginay dia manana torolàlana feno momba ny SEO raha te handalina lalina amin'ny fototra ianao. Amin'ity tantara ity, handalo famaritana sasantsasany isika.
Ny SEO dia mijoro ho an'ny Search Engine Optimization. Izy io dia fizotran'ny fanatsarana ny tranokalanao amin'ny Internet.
Ny AutoSEO dia vokatra navoakan'i Semalt, ho an'ireo maniry hiditra ao amin'ny SEO nefa tsy mampiasa vola be.
FullSEO dia dikan-tsarimihetsika faratampony AutoSEO izay manamafy ny fiarahamiasa amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny SEO sy ny mpitantana.
SSL dia lafin-javatra fiarovana izay mahatonga ny angon-drakin'ny mpanjifa hitahiry ny tranokalanao ho azo antoka kokoa.
Ny teny fanalahidy dia teny na fehezanteny voafarin'ny olona rehefa mahita ny tranonkalanao.
Ny laharam-boninahitra dia izay toeranao ny pejinao, na ny teny fanalahidy no miseho ao amin'ny masinina fikarohana.
Ny fifamoivoizana dia ny isan'ny olona mitsidika ny tranokalanao.
Fahatakarana ny tranonkala Semalt vaovao
Ny AutoSEO, FullSEO, ary SSL dia mbola vokatra ampiasain'i Semalt hanosehana ny tranokalanao. Araka ny voalaza ao amin'ny lahatsoratray teo aloha momba ilay lohahevitra, ireo vokatra rehetra ireo dia manana firaketana voaporofo fahombiazana. Raha te hahazo fampahalalana misimisy momba ny tsipika momba ny vokatra ianao dia jereo ny lahatsoratra taloha.
Ho an'ity bilaogy ity, dia hifantoka amin'ny fikarohana ny endri-javatra vaovao sy ny famolavolana singa amin'ny tranokala vaovao isika. Semalt dia nametraka endri-javatra mahavariana vitsivitsy izay tokony ho tafita.
Pejin'ny valin'ny fikarohana motera (SERP)
Pejy fanamarihana Uniqueness
Ho an'ny Google Webmasters
Pejy fanadihadian'ny pejy
Ny fahazoana ny dashboard Semalt vaovao
Ny takelaka vaovao dia mbola manana filtry matanjaka betsaka avy amin'ny taloha. Ny fahasamihafana lehibe dia avy amin'ny fiovan'ny interface izay manamafy ny filan'ny mpampiasa.
Rehefa mivadika ianao, dia ho hitanao ny isan'ny teny fanalahidy ao amin'ny tampony 1, 10, 30, ary 100. Ity bilaogy ity dia manome anao hevitra hoe manao inona ireo teny fanalahidy tsara indrindra. Azonao atao ny mampiasa io fampahalalana io mba hanamafisana ireo teny fanalahidy voafaritra sy tadiavina.
Mety ho hitanao fa misy andian-teny manan-danja indrindra manampy anao amin'ny famoahana ny varotra miova fo amin'ny tranokalanao. Ny dashboard SEO an'ny Semalt dia afaka manampy anao hahafantatra ireo teny manan-danja mitondra fifamoivoizana bebe kokoa. Atambatra amin'ny angona momba ny isan'ny fifanakalozana ao amin'ny tranonkalanao, dia mety ho hitanao fa manintona ireo karazan-dàlana tsy mety ianao.
Fahatakarana ny pejy momba ny valin'ny motera (SERP)
Ny Pejin'ny Fikarohana Fikarohana dia manome anao antsipirihany momba ny fomba ananan'ny tranonkalanao ao anaty fikarohana iray. Manome anao amin'ny antsipiriany momba ny laharan'ny teny fanalahidy sy ny fomba hitondrany ny pejinao izany. Izy io koa dia manome fampahalalana tsy hita amin'ny tranokala SEO maro hafa: fampahalalana momba ny mpifaninana.
Azonao atao mihitsy aza ny manapa-kevitra ny hametraka an'io fampitahana io amin'ny motera fikarohana tianao. Google no fitaovana fikarohana voalohany eran'izao tontolo izao, fa raha mahita mpihaino mety tonga ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana Yahoo na Bing, dia mety hahita teny teny voafaritra tsara ianao mba hahitana tsara kokoa noho izany. Azonao atao ny manangana fampielezan-kevitra mikendry ny hikapoka ny mpifaninana aminao amin'ny milina telo rehetra.
Rehefa mandinika SEO dia Semalt dia mahatsapa fa ny data dia ny zava-drehetra. Orinasa marobe no hanampy anao amin'ny famoronana tetik'asa Google AdWords, fa vahaolana fohy fotsiny io. Tsy hanatsara ny fitadiavana ny tranokalanao mandritra ny fotoana kelikely ny doka, fa manome tombony kely fotsiny anao izay miafara amin'ny vola. Ireo tranonkala namboarina miaraka amin'ny SEO ao an-tsaina dia nikasa ny tampon'ireo pejy ireo ary hitohy hatrany amin'ny laharam-pahamehana.
Inona no atao hoe Check Uniqueness Check?
Ny SEO dia zavatra iray mitaky anao anao ho miavaka ny famoronana ary koa mitovy amin'ireo mpifaninana aminao manana toerana ho an'ny teny fanalahidy.
Ireo mpanoratra SEO manam-pahaizana momba ny Semalt dia manaiky an'io olana io amin'ny fanomezana anao teny miavaka miavaka izay ho eo ary manome mpanoratra izay afaka manoratra ny atiny tokana. Ny SEO dia mahay mandanjalanja, saingy i Semalt dia efa manana tranga izay miteny amin'ny fahombiazany.
Aoka hatao hoe mpanoratra mpanoratra votoaty fotsiny ianao vao niditra tao amin'ny orinasa, saingy mila fanampiana kely ianao raha te-hahatratra ny pejinao. Ity ambany ity dia misy sombiny kely avy amin'ny pejinao izay nopetahana ny faritra fizahana ny tsy fitovian'ny pejy amin'ilay tranonkala Semalt vaovao.
Ho hitanao fa misy ny misongadina ao amin'ny ankamaroan'ny pejy. Taorian'ny nandehanana azy tamin'ny alàlan'ny fizahana votoaty, dia niaiky fa any amin'ireo toerana hafa ao amin'ny tranonkala ny fizarana ireto. Vokatr'izany dia eo amin'ny 13 isa isan-jato ny maha-tokana ity pejy ity.
Ny milina fikarohana dia mety hahitana laharam-pahamehana raha toa ka heverina ho manam-pahefana na loharano atokisana. Ny fomba iray hamaritan'ny milina fikarohana izany dia amin'ny alàlan'ny mampiavaka ilay fitaovana. Raha SEO dia tapa-kevitra ny hitady teny fanalahidy mifandraika, izay mety hizara tranonkala maro, ny tranonkala iray tsy mahavita mijoro eo anivon'ny vahoaka dia hitohy hatrany ny laharam-pahamehana.
Semalt dia orinasa mahatsapa izany. Amin'ny fampifangaroana azy amin'ny SERP dia ahafahantsika mamaritra tsara na ilaina ny fanovana paikady na tsia. Mety ho ampy hahafahanao manao ny laharana voalohany amin'ny 100 ianao miaraka amin'ny fiheverana voafetra momba izany. Na izany aza, ny folo voalohany dia mitaky ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fikarakarana ireo teny voafaritra manokana sy ny votoaty tsy manam-paharoa.
Manara-maso ny tranokala Google miaraka amin'ny Semalt
Amin'ny maha orinasa iray lehibe indrindra eto an-tany, mety ho efa tsapanao fa manana fitaovana maro i Google amin'ny fanaraha-maso ny fampitana. Mikatsaka ny famenoana an'io fampiasa io i Semalt amin'ny alàlan'ny manampahaizana sy mpikarakara SEO azy hanamafisana izany. Na izany aza, ho an'ireo izay eo ambanin'ny programa an'ny webmaster , Semalt dia manana vahaolana ho anao ihany koa.
Amin'ny alàlan'ny fandefasana rakitra HTML avy amin'ny tranonkalany ary alefaso izany ao amin'ny tranonkalanao, Semalt dia afaka manara-maso angon-drakitra amin'ny antsipiriany kokoa. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hametaka ny HTML amin'ny tranokalanao koa. Raha manana fisafotofotoana momba ity dingana ity ianao, Aza misalasala manatona ny mailaka mpanohana azy ireo mpanjifa. Raha tianao ny fantsona iray hafa, ny fampahalalana azy ireo dia ao amin'ny farany ambany amin'ny pejy tsirairay.
Ankoatra izany, ny fampidinana ireo angon-drakitra mivantana mankany amin'ny Semalt dia mampihena ny isan'ny toerana hitandremanao ny data. Talohan'izany, mety nanana dashboard iray ho an'ny tranokalanao ianao, tontonana iray ho an'ny analytics teny fanalahidy, ary iray hafa ho an'ny data data sitemap. Miaraka amin'i Semalt, izany rehetra izany dia ao amin'ny tranokala iray.
Pejy fanadihadian'ny pejy ary ahoana ny fiantraikany amin'ny SEO anao
Rehefa tonga amin'ny SEO izy dia mety tsy mieritreritra momba ny hafainganan'ny pejinao misy fiantraikany lehibe. Saingy, misy ny fiantraikany amin'ny SEO ny taham- pandrakanao ny pejinao.
Ny lakile dia ao amin'ilay teny hoe "optimization", ny tranonkala efa voatsara dia iray izay tsy misy rohy tapaka, tadivavarana ary vesatra haingana. Rehefa miditra amin'ny tranokala ny ekipan'ny manam-pahaizana momba ny SEO, ny famakafakana azy ireo dia hanambara ireo teboka tapaka ireo ary hiantoka fa ny fampahalalana mifandraika ihany no mitondra ny mpanjifa.
Raha jerena fa ny antontan'isa teo aloha momba ny olona manana elanelana mandritra ny 50 millisecond, dia ilaina ny manana pejy haingana izay mora vakiana. Ity ambany ity ny dashboard izay hampiasainao hanarahana ny hafainganao.
Araka ny hitanao dia tena tsara ny pejy. Misy lesoka vitsy kely azonao arahana, fa ireo angamba no fiovan'ny varotra mety hitranga. Na izany aza, io dashboard io dia voafaritra manokana amin'ny dikan-desktop. Raha mijery ny takelaka finday ao amin'ity pejy ity isika dia hanambara zavatra hafa.
Miaraka amin'ireo Amerikana 81 isan-jaton'ny olona mampiasa smartphone, dia tsy maintsy fantatrao ny ilana fanamafisana ny finday. Ny ohatra etsy ambony dia milaza fa ny tranonkala iray dia salanisan'ny mpifaninana aminy. Na izany aza, Semalt dia manao asa izay mahatonga anao tsy mihoatra ny salanisa.
Ahoana no ahafahan'ny dashboard vaovao an'i Semalt manampy ahy ho any amin'ny tampon'ny Google?
Be loatra ny habetsaky ny angon-drakinao isan'andro. Vokatr'izany dia tsy afaka atao mihazona ny fikosehana isan'andro. Rehefa manambatra ny hetsika fanaonao tsy tapaka ny tompona tranokala mitantana tranonkala iray, dia hihatambatra izy roa.
Ny dingan'ny Semalt dia fomba iray hanatsorana ny fizotry ny fitantanana ny tranonkala amin'ny fomba iray ahafahanao mitodika ny sainao miverina amin'ny toerana tokony hananany: ny orinasanao. Miaraka amin'ny vondron'ireo manampahaizana manokana natokana ho an'i Semalt faly mitari-dalana anao amin'ny SEO, dia hahita ny tenanao eo an-tampon'ny Google ianao.
Ny dashboard dia vokatry ny dingan'ny dingana iray hahafantarana ny tadiavin'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny rafitra tsotra, tianay ho azo antoka fa tsy mahazo fanavaozana tsy tapaka amin'ny fitantanana ny fampielezan-kevitra SEO ataonao fotsiny ianao, fa fantatrao sy fantatrao ny fitomboana entin'ireo fanentanana ireo amin'ny orinasanao.
Raha tompona orinasa ianao ary maniry ny hisian'ny fifamoivoizana, vonona ny hamonjy anao i Semalt amin'ny toerana ahafahanao misintona fifamoivoizana, hampifandraisanao ny mpanjifa ary hampiakarana ny varotra.